Ụgbọ elu Saudia na-eme atụmatụ ịgbasawanye Caribbean ọhụrụ site na Summer 2022
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Ụgbọ elu Saudia na-eme atụmatụ ịgbasawanye Caribbean ọhụrụ site na Summer 2022
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, (n'aka nri) na Captain Ibrahim Koshy, CEO nke Saudia ụgbọ elu, kwee aka mechie nkwekọrịta ahụ. Na-ele anya bụ Senator Hon. Aubyn Hill, Minista na-enweghị Pọtụfoliyo na Ministry of Economic Growth na Job Creation. Oge a bụ nzukọ iji kwurịta atụmatụ maka Saudia Airlines iji gbasaa ụgbọ elu na Jamaica site n'oge okpomọkụ 2022. Minista Bartlett na Hill nọ na Riyadh, Saudi Arabia, iji nyochaa ohere itinye ego na ịkwalite njem njem na Jamaica.
Ka Jamaica na-achọ ime ngwa ngwa mgbake njem nlegharị anya na-elekwasị anya na ahịa ndị na-abụghị omenala, Minista njem nlegharị anya Hon. Edmund Bartlett ekwupụtala na atụmatụ dị na ụgbọ oloko iji kwalite njikọta ikuku n'etiti Middle East na Caribbean, ebe ụgbọ elu Saudia ga-agbasawanye ụgbọ elu na Jamaica n'oge ọkọchị 2022.
Njem nlegharị anya Jamaica na-akpụpụta ahịa ọhụrụ na Middle East nke ga-enye njikọta na Africa, Eshia na Asia Minor.
Na mkparịta ụka ya na ụgbọ elu Saudia enwere nghọta na ebumnuche bụ maka itinye aka na oge okpomọkụ 2022.
Atụmatụ sara mbara bụ ka Jamaica bụrụ ebe a na-ejikọ ọnụ site na Middle East ruo Caribbean, Central America, South America na mpaghara North America.
Nkwupụta a sochiri njem Minista Bartlett mere na nso nso a na Dubai na United Arab Emirates (UAE) na Riyadh, Saudi Arabia, iji chọpụta ohere itinye ego na ịkwalite. njem nlegharị anya na Jamaica.
"Izu abụọ gara aga abụrụla ihe dị egwu nye anyị n'ịgbalị ịmepụta ahịa ọhụrụ na Middle East nke ga-enye anyị njikọ na Africa, Asia na Asia Minor. Anyị enweela mkparịta ụka na Dubai na Riyadh. Mkparịta ụka anyị na ụgbọ elu Saudia nwere ọganihu nke ọma ma anyị enweela nghọta na enwere ọchịchọ maka itinye aka n'oge okpomọkụ nke 2022, "Minista njem nleta kwuru.
"A na-arụ ọrụ nkọwa nke nhazi ahụ na Saudia na ndị ọzọ na-ebu ụgbọ mmiri nke ga-eme ka ohere maka njikọta dịkwuo mfe na enweghị nkebi n'oge na-adịghị anya. Yabụ na anyị nwere obi ụtọ ịhụ ụzọ ọnụ ụzọ Middle Eastern ka emepere Jamaica, "ka ọ gbakwụnyere.
Minista Bartlett kwuru na atụmatụ sara mbara bụ inwe Jamaica ghọrọ isi obodo maka njikọta site na Middle East ruo na Caribbean, Central America, South America na mpaghara North America. Nke a ga-edobe Jamaica dị ka isi na njikọta ikuku n'etiti East na West. O kwuru, "Anyị nwere obi ike nke ukwuu na anyị ga-ahụ nsonaazụ site na nke a n'oge dị mkpirikpi dịka ụgbọ elu abụọ ahụ anyị kwuru na ha gosipụtara agụụ siri ike maka Caribbean na, karịa, Latin America," ka o kwuru.
Saudia, nke a na-akpọbu ụgbọ elu Saudi Arabian, bụ ụgbọ elu nke Saudi Arabia. Ọ bụ nke atọ kachasị na Middle East n'ihe gbasara ego ha nwetara, n'azụ Emirates na Qatar Airways. Ọ na-arụ ụgbọ elu ụlọ na nke mba ọzọ gaa n'ihe karịrị ebe 85 na Middle East, Africa, Asia, Europe na North America.